Umgibeli Archives - Isambane News
Umnyango Wezokuthutha eGauteng wethule uhlelo lwe-App lokusebenza ukubika ama-potholes
Kunesixazululo sabasebenzisi bomgwaqo abakhungathekile ukudambisa inkinga yemigodi eGauteng. Umnyango wezokuThutha kanye nezeMigwaqo esifundazweni usebenzisa ubuchwepheshe ngohlelo lokusebenza (App) lokubika imigodi…
Ingane yentombazane isesimeni esibucayi,umama ulimele kanzima ngemuva kokuba imoto ebebehamba ngayo ishayisane neveni eNigel
Ingane yentombazane isesimeni esibucayi,umama ulimele kanzima ngemuva kokuba imoto ebebehamba ngayo ishayisane neveni eNigel Ingane yentombazane isesimweni esibucayi kanti unina…
Kushone owesilisa ngemuva kokugxuma etekisini ebihamba eKZN
UShalen Panday oneminyaka engu-40 odume ngelika-PJ ushone ngemuva kokugxuma etekisini elaphuka amabhuleki lihamba eSoftwood Crescent eTrenance Park,KZN ekuseni (ngoLwesibili). Izakhamuzi…
I-Santaco ikuqinisekisile ukuthi izonyuka imali yokugibela amatekisi kusukela ngoJulayi
Abagibeli bamatekisi kuzomele bangene bajule emaphaketheni abo ukuze bathole imali yokugibela kusukela ngoJulayi. ISouth African National Taxi Council (Santaco) isikuqinisekisile…
Ingozi eyenzeke ku-N11 eNewcastle idlule nemiphefumulo yabantu ababili
Kubikwa ukuthi omunye wesibili ushonile ngenxa yale ngozi njengoba ngaphambilini bekubikwe ukuthi uyedwa. Kubikwa ukuthi kushone abantu ababili kwalimala kabi…
Ezomphakathi Ezosaziwayo Izindaba Izindaba ezihamba phambili Okufakiwe Umgibeli
uLvovo Derrango usinde engozini yemoto izolo kusihlwa
Isihlabani se-kwaito esiphinde sibe ngusomabhizinisi uThokozani Ndlovu, odume ngelikaLvovo Derrango, ubandakanyeke engozini eyenzeke eNewcastle,enyakatho-ntshonalanga yeKwaZulu-Natal ngoLwesibili ebusuku. Ingozi,yenzeke ngesikhathi uLvovo…
Kushone oyedwa engozini eyenzeke ku-N3
Kushone umuntu oyedwa engozini yezimoto ezintathu nebhasi ebangele ukuvalwa komgwaqo omkhulu namhlanje ekuseni ku-N3 obheke eningizimu. Abezimo eziphuthumayo bakwa-Mi7 endaweni…
Kushone amalungu ebandla le-ZCC angu-35 ngemuva kokuba ibhasi ebeligcwele liwele emhosheni,kwalimala abangu-71
Amalungu ebandla le-ZCC angu-35 ashonile ngemuva kokuba ibhasi ebeligcwele liwele emhosheni, kwalimala abantu abangu-71 Amaphoyisa eZimbabwe Republic Police aqinisekise ukuthi…